घरमै बसेर कपाल स्ट्रेट बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय – My Blog
No Comments on घरमै बसेर कपाल स्ट्रेट बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
काठमाडौँ । कागती, दुई चम्चा तोरीको तेल र एक कप नरिवलको तेल मिलाएर बिस्तारै हातले कपालमा लगाउनुहोस्। यसले कपाललाई सिधा गर्न मद्दत गर्छ। यो मिश्रणलाई कपालमा राम्रोसँग लगाएर प्लास्टिकले छोपेर २ घन्टा सम्म छाडिदिनुहोस्। र त्यसपछि तातो पानीले धुनुहोस्।
यो तरिका हप्तामा एक दिन अपनाउने गर्नाले तपाइको कपाल बिस्तारै सिधा हुनुका साथै नरम, मुलायम र स्वस्थ देखिन्छ । यसले तपाइको सौन्दर्यलाई पनि फाइदा गर्छ।
दूध र महको प्रयोग: आधा कप दूधमा दुई चम्चा मह मिसाउने । अझै राम्रो बनाउन केरा पनि मिसाउन सकिन्छ । केरा दूध र महको लेप बनाएर कपालमा लगाउने । यसलाई आधा घण्टा सम्म राख्ने र पछि स्याम्पु लगाएर सफा गर्ने।
नरिवल र निम्बुको पेष्ट: नरिवललाई पिसेर त्यसमा नरिवलकै दूध मिसाउने अनि कागती हालेर ब्रशले कपलाको रेशा रेशामा लगाउने । अनि १ घण्टा पनि चिसो पानीमा स्याम्पु लगाएर पखाल्ने । यसो गर्नाले पनि कपाल नरम र सिधा हुन्छ।
तातो तेलले मालिस गर्ने : नियमित रुपमा नुहाउनुभन्दा केहि समयअघि तातो तेलले मालिस गर्ने। मलिस गर्ने बेलामा नरिवलको तेलमा ओलिभ वाईल मिसाउने। केहि बेर पछि तउलियालाई तातो पानीमा भिजाउने र केहि समयपनि तउलिया निचोरेर ४५ मिनट सम्म कपालमा बेरेर राख्ने। त्यस पछि स्याम्पु लगाएर पखाल्ने यसो गर्नाले कपाल सिल्कि र नरम हुन्छ।
दूधको स्प्रे : दूधलाई एउटा स्प्रे बोतलमा राख्नुस अनि कपालमा स्प्रे गर्नुस् । यसो गरेर आधा घण्टा सम्म राख्नुस र पखाल्नुस्। यो बिधिले कपाल नरम,चिप्लो र चम्किलो हुन्छ।
ओलिभ वाईल र अण्डाको प्रयोग : दूईवटा अण्डा फुटाएर फिट्नुहोस र त्यसमा ओलिभ वाईल मिसाउनुस। यस्तो मिक्सलाई कपालमा लगाउनुहोस् र एक घण्टा पछि स्याम्पु लगाएर पखाल्नुस्। यसले कपाल नरम र शिल्की बनाउँछ।
कागती, तेल र नरिवल : कागती, दुई चम्चा तोरीको तेल र एक कप नरिवलको तेल मिलाएर बिस्तारै हातले कपालमा लगाउनुहोस् । यसले कपाललाई सिधा गर्न मद्दत गर्छ। यो मिश्रणलाई कपालमा राम्रोसँग लगाएर प्लास्टिकले छोपेर २ घन्टासम्म छाडिदिनुहोस् । र त्यसपछि तातो पानीले धुनुहोस्।
यी तरिका हप्तामा एकदिन अपनाउने गर्नाले तपाईको कपाल बिस्तारै सिधा हुनुका साथै नरम, मुलायम र स्वस्थ देखिन्छ । यसले तपाइको सौन्दर्यलाई पनि फाइदा गर्छ।
← Ripरोल्पामा बाख्रा हेरेर फर्कदै गरेका ११ वर्षीय प्रवीणलाई अ:’रि:ङ्गालले घे:’रा हाल्यो : अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृ:’त्यु → दुबै मृगौला फेल भएकि श्रिमतिको नाममा उठाएको १५ लाख लिएर अर्कैसँग श्रिमान फरार , यता बिरामीको यस्तो बिजोग (हेर्नुस् भिडियो)